Kudzoka kwaStallman kuFree Software Foundation | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza sekuti mushandirapamwe wezvematongerwo enyika wakarurama kubvisa zvese zvavasingade zviri kutanga kusangana nekupokana. Uye avo vedu vanopesana netsika yekukanzura (tingave tinobvumirana kana kwete neakakanzurwa) tinodzoka kuzopemberera. Richard Stallman anodzokera kubhodhi revatungamiriri veFree Software Foundation.
"Ndiri zvakare mubhodhi reFree Software Foundation," akadaro Stallman, uyo akakurumidza kuvimbisa kuti haazoregi zvakare.
1 Kudzoka kwaStallman
1.2 "Mhosva" yaStallman
1.3 Chikumbiro chekusiya basa
1.4 Chiziviso chekudzoka kwaStallman
Kuti tinzwisise nyaya iyi tinofanirwa kuunza vatambi vatatu:
Jeffrey Epstein: Iye akapomerwa mhosva bhirionea uyo akapa shamwari dzake dzakapfuma uye dzakakurumbira nekambani yevakadzi kusanganisira vadiki. Akazviuraya mutirongo.
Marvin Minsky: Piyona wehungwaru hwekugadzira uye muvambi weyekutsvaira murabhoritari yeMassachusetts Institute of Technology (MIT). Mushure mekufa kwake, mumwe wevakabatwa naEpstein akataura kuti achiri mudiki akarara naye kune imwe yemafaro akarongwa nenjodzi iyi.
Richard Stallman: Muvambi wesangano reFree Software, mugadziri weGPL rezinesi, iyo Free Software Foundation uye chirongwa cheGNU (Base yezvinenge zvese kugoverwa kweLinux)
Muverengi anondiyeuchidza kuburikidza neTwitter kuti chiitiko ichi chaive chinotevera. Pamberi pechapupu, uye chakakurudzirwa naEpstein, mudiki akapa kuvata naMinsky. Haana kumbobvuma.
Chiito chaStallman "chisingataurike" chakakonzera kutsamwa kwemhomho yezvematongerwo enyika kwaive kutumira email. Achitaura nezve chiito chekuramba nevadzidzi veMIT akanyora kuti:
Chiziviso cheChishanu chiitiko kusaruramisira kuna Marvin Minsky:
“Mushakabvu AI 'piyona' Marvin Minsky (uyo ari kupomerwa mhosva yekurwisa
mumwe weavo vakaurayiwa naEpstein ) »
Kusaruramisira kuri mushoko "kurwisa." Izwi rekuti "kushungurudzwa pabonde" harina kujeka uye rinotsvedza zvekuti rinobatsira kukwira kwemitengo yekupomerwa: kutora zvirevo zvekuti mumwe munhu akaita X uye kutungamira vanhu kufunga kuti ndiY, kuti zvakanyanyisa kupfuura X.
Iko kupomerwa kwakataurwa muenzaniso wakajeka wekuwedzera kwemitengo. Rondedzero yacho inotaura kuti Minsky akarara nemumwe wevakadzi vaEpstein. (Ona https://www.theverge.com/2019/8/9/20798900/marvin-minsky-jeffrey-epstein-sex-trafficking-island-court-records-unsealed.)
Ngatiti icho chaive chokwadi (ini handioni chikonzero chekusazvitenda).
Izwi rekuti "kurwisa" rinofungidzira kuti akashandisa simba kana mhirizhonga, neimwe nzira isina kutaurwa, asi chinyorwa pachacho hachitauri chinhu chakadai.
Ivo chete ndivo vakaita zvepabonde.
Tinogona kufungidzira zviitiko zvakawanda, asi zvinonyanya kunzwisisika ndezvekuti akazviratidza kwaari zvizere achida. Achifunga kuti Epstein akamumanikidza, angadai akave nezvikonzero zvekumuudza kuti azvivanze kune vazhinji vavanoshamwaridzana navo.
Ndasvika pamhedziso, kubva kune dzakasiyana mienzaniso yekumhan'arira inflation, kuti zvakaipa zvachose kushandisa izwi rekuti "kusangana pabonde" mukupomera.
Chero maitiro aunoda kushoropodza, iwe unofanirwa kuatsanangura nezwi chairo rinodzivirira hunhu husina hunhu nezvehunhu hwekushoropodzwa.
Chikumbiro chekusiya basa
Mudzidzi paMIT akafunga kutanga bhero. Zvinangwa zvaro zvaive pachena:
Zvirinani Richard Stallman haasi kupomerwa kubata chibharo chero munhu. Asi ndiwo mwero wedu wepamusoro-soro here? Chiyero icho ichi chinzvimbo chepamusoro chinonamatira? Kana izvi zviri izvo MIT inoda kudzivirira; Kana izvi zviri izvo MIT inoda kumiririra, saka, hongu, upise pasi ...
… Bvisai zvese, kana zvichidikanwa, uye regai chimwe chinhu chiri nani zvikuru chivakwe kubva mumadota.
Stallman, anga aine zvirevo zvishoma zvine mubvunzo kuchikwereti chake, aifanira kusiya basa kubva kuFree Software Foundation pamberi pekumanikidzwa neruzhinji.
Chiziviso chekudzoka kwaStallman
Munguva yemusangano weLibrePlanet, mudziviriri weSoftware Yemahara akadaro:
Ndinofanira kuita chiziviso. Ini ndiri zvekare mubhodhi revatungamiriri veFree Software Foundation. Isu tanga tichishanda pavhidhiyo kuti tizivise, asi zvainge zvakaoma. Isu takanga tisina ruzivo nerudzi urwu rwechinhu saka hatina kuchipedza, asi heino kushambadzira. Vamwe vachafara neizvi uye vamwe vachanyadziswa, asi ndiani anoziva. Chero zvazvingaitika, ndizvozvo. Uye handisi kuzosiya basa kechipiri.
Ngatitarisirei kuti kudzoka kwaStallman ndiko kutanga kwekudzoka kwevanhu vakakosha vakasiyiwa nekuda kwekufunga zvakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kudzoka kwaStallman kuFree Software Foundation
Stallman ndiye akashanda zvakanyanya kana zvasvika kune yemahara software. Ndiri kufara kwazvo kudzoka kwaStallman.
Carlos Correa akadaro
Ndicho chinhu chakanakisa chinogona kuitika kune yemahara software hwaro, ndinotenda kuti vanobatana nevashandisi vasiya nzvimbo zhinji yepropathi software.
Pindura Carlos Correa
Ndiri kufara kwazvo.
Anombundikira Richard Stallman.
Zuva rinofara renharaunda yese yemahara.
Epic trouser kudonha
Reynold Cordero akadaro
Kushungurudzwa uye kuputswa kwaRichard Stallman (uyezve, sezvo tiri, veFSF uye chirongwa cheGNU), ndechekuti zvinonetsa zvimwe zvido zvekuti pane chimwe chinhu chiri pamutemo seFree Software. Iyo yakafanana chaizvo neyakavhurika Software uye nedzimwe pfungwa dzakafanana, asi nekuda kwekuvhima kwevaroyi, manenji uye vanhu vanoda kutema nematombo, tinoona kuti hazvina kufanana.
Pindura Reynaldo Cordero